တွန်ဂါနိုင်ငံတော်သည် Bitcoin ကိုတရားဝင်တင်ဒါအဖြစ်လက်ခံနိုင်သည်၊ ပါလီမန်အမတ်ဟောင်း - Bitcoin သတင်း - Token Myanmar
Tonga နိုင်ငံတော်သည် Bitcoin ကို တရားဝင် တင်ဒါအဖြစ် လက်ခံနိုင်သည်ဟု Tonga ပါလီမန်အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Lord Fusitu'a မှ တွစ်တာတွင် တွစ်တာတင်ခဲ့ရာတွင် အဆိုပါဖြစ်ရပ်သည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အချိန်ဇယားတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ လာမည့်ဆောင်းဦးရာသီတွင် Tonga ပါလီမန်မှဥပဒေကြမ်းတစ်ခုကိုအတည်ပြုပြီး Bitcoin သည်နို ၀ င်ဘာလတွင်ဒေသတွင်းတရားဝင်တင်ဒါဖြစ်နိုင်သည်ဟု Fusitu'a ကယုံကြည်သည်။
Tonga ပါလီမန်၏အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Lord Fusitu'a သည် Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုတရားဝင်တင်ဒါအောင်ရန်အတွက် Bitcoin ဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုနိုင်သည်ဟုဆိုသည်
လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဓနသဟာယ ပစိဖိတ်ပါလီမန်အဖွဲ့မှ Tonga ၏ ဥက္ကဌ သခင် Fusitu'a သည် bitcoin ထောက်ခံသူဖြစ်ပြီး ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်၊ ရှင်းပြသည်။ Tonga ၏နိုင်ငံတော်အစိုးရသည် Bitcoin ကိုတရားဝင်တင်ဒါအဖြစ်လက်ခံနိုင်သည်ဟု Twitter တွင်ဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါသတင်းသည် Bitcoin ပြုလုပ်ရန်အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ၏တွန်းအားပေးမှုကိုနောက်လိုက်သည် (BTCယမန်နှစ်က တရားဝင် တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်က ဥပဒေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ Salvadoran ကွန်ဂရက်နှင့် BTC El Salvador တွင်တရားဝင်တင်ဒါအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
တစ်ချိန်က Tonga ပါလီမန်အမတ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသော Lord Fusitu'a က Tonga တွင် အလားတူဖြစ်ရပ်မျိုး ကြုံရမည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ အင်္ဂါနေ့တွင်၊ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် Polynesian နိုင်ငံကို တင်ဒါအဖြစ် Bitcoin တရားဝင်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ETA နှင့် ပတ်သက်၍ Lord Fusitu'a အား မေးမြန်းခဲ့သည်။
“စက်တင်ဘာ/အောက်တိုဘာ ဥပဒေကြမ်းကို လွှတ်တော်ကို တင်ပြတယ်။ လွန်သွားပြီ” ဟု သခင် ဖူစီတုအာ ပြန်ပြောသည်။. “(အဲဒါကို) ဘုရင်မင်းမြတ်ထံ တင်ပြဖို့ နန်းတော်ရုံးကို ပို့လိုက်တယ်။ တစ်လ – Privy Council မှ အကြံပြုထားသည့်အတိုင်း HM သည် ဘီလ်ကို အတည်ပြုသည်။ အစိုးရက အသက်ဝင်မည့်ရက်စွဲဖြင့် 2-3 ပတ်ကို ပြန်တမ်းချသည်။"
Lord Fusitu'a က ဆက်ပြောသည်။
စတင်သည့်ရက်စွဲတွင် (bitcoin) သည် တရားဝင် တင်ဒါဖြစ်လာသည်။
ဆောင်းဦးရာသီတွင်တင်သွင်းမည့် Bitcoin ဥပဒေကြမ်းအား ဥပဒေပြုအမတ်ဟောင်း၊ Lord Fusitu'a မှလွန်ခဲ့သည့်နှစ်က Bitcoin လက်ခံကျင့်သုံးခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်
Lord Fusitu'a သည် အချက်ငါးချက်အစီအစဥ်ကို တွစ်တာတင်ပြီးနောက် လူတစ်ဦး မေးတယ်။ “ဥပဒေမူကြမ်း အတည်ပြုပြီးပြီလား၊ ဒါမှမဟုတ် လွှတ်တော်က အတည်ပြုပြီးပြီလား” ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သခင် Fusitu'a ပြန်ပြောသည်။ အဆိုပါမေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ “ဒီဥပဒေကြမ်းကို စက်တင်ဘာ/အောက်တိုဘာမှာ လွှတ်တော်ကို တင်ပြမယ်။ ဇွန်လတွင် (က) အစည်းအဝေးအသစ် စတင်မည်ဖြစ်သည်။ ဇွန်လဥပဒေ = နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံး။ ဥပဒေအရ ဇူလိုင်လ မဲဆန္ဒနယ်မှ လာရောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဩဂုတ်လဥပဒေ – တစ်နှစ်အတွက် အစိုးရဥပဒေပြုရေး ပက်ကေ့ချ်။ ဥပဒေအရ စက်တင်ဘာ/အောက်တိုဘာ ပုဂ္ဂလိက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဥပဒေကြမ်းများကို တင်သွင်းနိုင်သည်။”
Lord Fusitu'a သည် Tonga တွင် bitcoin ကို နိုင်ငံအတွင်း တင်ဒါအဖြစ် တရားဝင်ခွင့်ပြုခြင်းအကြောင်း အရိပ်အမြွက်ပြောသည်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါ။ ဇူလိုင်လ 5၊ 2021၊ ပေါ့တ်ကာစ်တွင် အပိုင်း 368 တွင် Bitcoin ဘာလုပ်ခဲ့သနည်း။Tonga ပါလီမန်အမတ်ဟောင်းက bitcoin မွေးစားခြင်းသည် Tonga အတွက် မည်သို့အကျိုးရှိမည်ကို ရှင်းပြခဲ့သည်။
“တခါသုံး ၀င်ငွေ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာတဲ့ ဖောက်သည်တိုင်းရဲ့ စီးပွားရေးက ပထမ အကျိုးအမြတ် ရပြီး ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ 15% VAT ကောက်ခံတဲ့အတွက် လူတိုင်းက 15% VAT မှာ 30% အပိုထည့်ထားတယ်၊ ရထားလမ်းကနေ တစ်ခါသုံးရတဲ့ ၀င်ငွေပဲ” ဟု Lord Fusitu'a က ပြပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ပေါ့တ်ကာစ်တွင် Lord Fusitu'a က ထပ်လောင်းရှင်းပြသည်-
ထိုအပို 30% နှင့်အတူ တပြိုင်နက်တည်းတွင် အချို့က ၎င်းကို စီးပွားရေးတွင် ထည့်ထားခြင်းထက် အမြတ်ထုတ်မည့် ထိုင်ခုံများကို ပေါင်းတင်ခြင်းထက် သိမ်းဆည်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်၊ တံငါသည်ဖြစ်ပြီး တစ်သက်လုံး ပါးစပ်နဲ့ပြောဖူးသူဟာ ငွေကြေးလွတ်လပ်ခွင့်အတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ စုဆောင်းငွေတွေ ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကို တစေ့တစောင်း တွေးကြည့်မိပါတယ်။
ယခုအချိန်တွင်၊ တွန်ဂါ၏တက်ကြွသောပါလီမန်အမတ်များနှင့် တွန်ဂန်လူမျိုးများသည် bitcoin ကိုတရားဝင်တင်ဒါအဖြစ်လက်ခံရန်ဆန္ဒရှိမရှိမသေချာပါ။ အယ်လ်ဆာဗေဒိုသည် Bitcoin ဥပဒေကို အတည်ပြုခဲ့သော်လည်း၊ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာ7ရက် 2021 တွင်အချို့ရှိခဲ့သည်။ အတိုက်အခံ ဆီသို့ အစိုးရ၏ဆုံးဖြတ်ချက်. ထိုအချိန်မှစ၍ သမ္မတ Nayib Bukele နှင့် Salvadoran အစိုးရတို့က ပေါင်းထည့်ခဲ့သည်။ ဘဏ္ဍာတိုက်သို့ BTC နှင့် bitcoin တူးဖော်ရေးခြံ မီးတောင်စွမ်းအင်ဖြင့် မောင်းနှင်သည်။ မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Bitcoin၊ Bitcoin (BTC)၊ Bitcoin မွေးစားခြင်း။၊ bitcoin ကိုတရားဝင်တင်ဒါအဖြစ်၊ BTC မွေးစားခြင်း။၊ BTC ဘဏ္ဍာရေး၊ အယ်လ်ဆာဗေဒို၊ တွန်ဂါနိုင်ငံတော်၊ တရားဝင်တင်ဒါ၊ သခင် Fusitu'a၊ Lord Fusitu'a Podcast၊ Lord Fusitu'a Twitter၊ Nayib Bukele၊ Salvadoran အစိုးရ၊ တွန်ဂါ၊ တွန်ဂါပါလီမန်၊ တွန်ဂါလွှတ်တော်
Bitcoin ကိုတရားဝင်တင်ဒါအဖြစ်အသုံးပြုသည့်နိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်၍ အရိပ်အမြွက်ပြောနေသည့် Tonga ပါလီမန်အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းကသင်မည်သို့ထင်သနည်း။ အောက်ဖော်ပြပါ မှတ်ချက်များကဏ္ဍတွင် ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်မြင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။
Jamie Redman သည် Bitcoin.com News တွင် သတင်းဦးဆောင်သူဖြစ်ပြီး ဖလော်ရီဒါတွင်နေထိုင်သော ဘဏ္ဍာရေးနည်းပညာဂျာနယ်လစ်ဖြစ်သည်။ Redman သည် 2011 ခုနှစ်ကတည်းက cryptocurrency အသိုက်အဝန်း၏တက်ကြွသောအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည် Bitcoin၊ ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ကုဒ်နှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောအက်ပ်လီကေးရှင်းများအတွက် စိတ်အားထက်သန်သူဖြစ်သည်။ 2015 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကတည်းက Redman သည် ယနေ့ခေတ်တွင် ပေါ်ပေါက်လာသော အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော ပရိုတိုကောများအကြောင်း Bitcoin.com သတင်းအတွက် ဆောင်းပါး 5,000 ကျော် ရေးသားခဲ့သည်။
Web3သည် အကြာကြီးတိုက်ခိုက်ရကျိုးနပ်သည်။